hoo!haa!! – Page 30 –
Post Views: 181 Onye ndu ogige ekpere ndi ụka katọlik n’Enugwu, akpọrọ ‘Adoration Ministry Enugu Nigeris’, (AMEN), bụ Rev. Fr. Ejike Mbaka, nọrọ n’Enugwu ụnyahụ bụ ụka kwue hoohaa, na ohere adịghị n’obi gọọment steeti Enugwu, n’afọ puku abụọ na iri na itolu na-abịa abịa. N’okwu ya, aka na-achị yabụRead More →
Post Views: 385 EGO/ỤBA/OGBENYERead More →
Post Views: 79 N’ụnyahụ ka-anọrọ nwụchie otu nwikorọbịa bịara izu ori n’ebe ana-echi ndi ụkọchukwu, nke kere ekike dịka ụkọchukwu. Mgbe aka kpara nwoke a, n’ụlọ ụka ukwu ‘Maria Asumpta Cathedral’ dị N’Owere, na syeeti Imo. Ndi nche mere ka nwoke a were anya ya hụ ntị ya ma wereRead More →
Post Views: 87 Ụmụ Naijiria bi n’akụkụ Ashanti nke mba Gana, ma na-azụ ahịa n’ebe akpọrọ ‘Suame Magazine Market’ na Kumasị, chịzịkwa uche n’aka maka na ndi Gana na-ebuso ha agha ugbu a. Ka ihe sị gbata kwụrụ n’ebe ahụ kịta, ndi Gana añụọla ya dịka iyi were kwue naRead More →
Post Views: 105 Ndi oji egbe, agbagbuela otu onye pastọ na onye amụma ama ama na Naijiria nakwa ọtụtụ mba ụwa ndi ọzọ. Ọbụ n’ebe obibi ya dị na Patakọtị nke steeti Rivers ka anọrọ were egbe dulaa nwoke a mụọ Aha nwoke a bụ ThankGod Abam. Ejikwa ọtụtụ ahaRead More →
Post Views: 80 Ndi Nenwe dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Anịnri na steeti Enugwu na-ebizi n’iwe n’ọnụma maka na ndi uwe ojii, ngalaba na-ahụ maka igbochi ndi oji egbe ezu akpọrọ FSARS n’aha nkenke, bịara nwụchikọọ ụfọdụ ndi obodo ahụ. “Arụ ha mere” bụ na ha chọrọ igba mbọ ịkwụsịRead More →
Post Views: 94 Bishọp ụka Nglikan na Dayọsis Agụata bụ Rt. Rev. Samel Ezeọfọ akpọọla oku ka ụmụ Naijiria gbarapụ otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị ‘All Progressive Congress’ (APC) na nhọputa nke afọ puku abụọ na iri na itolu na-abịa abịa, n’ihi na otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị ahụ emewala ụmụ Naijiria obi n’imeRead More →
EGWU (FEAR)/EGWU (MUSIC/PLAY)
Post Views: 216Read More →
Post Views: 131 N’ụbọchị Tusdee gara aga ka ndi uwe ojii nke steeti Anambara nwụchiri otu nwoke aha ya bụ Jemis Nwọra n’ihi na ojirila aka odo tigbue nwunye ya. Ọbụ na ụlọ nwere akara nke abụọ na ogbe Ụmụdiọka, nke dị na Mgbuka Nkpọọ, n’okpuru ọchịchị ime obodo mgbagoRead More →
K’anyị Lebaa anya na agwụgwa(RIDDLES), ma kọwaa uru agwụgwa bara
Post Views: 540 Na mbụ anyị chetara na mgbe anyị bụ ụmụaka, na agwụgwa bụ ihe anyị ji egwu egwu. Ugbu a, m gaghị echeta ikpeazụ m nụrụ ka mmadụ kwuru, “Gwam Gwam Gwam”, ọzọ. Ọ bụrụla ihe mgbe ochie ndị ugbu a amaghịzị maka ya. Ya mere n’hoohaa ga-akpọtekwaRead More →
Post Views: 185Read More →
AGA-AKWUGBU NDI UWE OJII ANỌ NA STEETI AKWA IBOM
Post Views: 143 A maala ndi uwe ojii mmadụ anọ ikpe ọnwụ n’Uyo nke steeti Akwa Ibom maka na ha gbagburu onye ji ọgba tim tim ebu ndi njem nke a na-akpọ onye ọkada. Aga-akwụgbu ha akwụgbu. Aha ndi a bụ: Mosis Akpaete ji ọkwa nspetọ, Idoko Samsịn, jikwa ọkwaRead More →
BUHARI EKWELA NKWA IDOZI ALA IGBO
Post Views: 156 Onye isi ala bụ Muhammadu Buharị ekwela nkwa ịrụ ọtụtụ ọrụ ga-eweta mgbanwe ahụrụ anya na mpaghara ọdịda-ọwụwa anyanwụ ala anyị tupu ya arituo n’ọkwa ọchịchị. O kwere nkwa, n’akụkụ ala anyị ahụ ga-aka mma mgbe ya ga-arịtu karịa ka ọ dị mgbe ya batara n’ọchịchị. ObụRead More →
IHE MBEREDE OKPORO ỤZỌ EGBUOLA ỤKỌCHUKWU NDI KATỌLIK
Post Views: 156 Ụlọ akwụkwọ mahadum ndi ụka katọlik dị na Nneochi na steeti Abịa, akpọrọ Spiritan University, bara na nnukwu iru uju ụbọchị Faraidee gara aga maka ọnwụ otu onye n’ime ha bụ Rev. Fr. Cosmas Agụọcha. Nwoke a ji ụgbọala mahadum a aga mgbe ọ gbakpuru n’okpuru otuRead More →
Post Views: 136 Ndi ụka Nglikan, dayọsis nke mgbago ugwu Enugwu (Enugu North Diocese), ewela ndi Fulani mmadụ atọ n’ọrụ ịgbasa oziọma nke Kraist nye ndi nchị ehi nọ n’okpuru ọchịchị ime obodo ndi a: Ezeagụ, Udi na mgbago ugwu Enugwu (Enugu North) nke steeti Enugwu. Bishọp nke ndi dayọsisRead More →
Post Views: 486 EGBE/EGBERead More →
Post Views: 276 Ndi Ufuezerakụ nke Ugwulangwu n’okpuru ọchịchị ime obodo Ọhaọzara nke steeti Ebọnyị na-ebizi n’ime oke ịtụ egwụ, maka mbuso agha ndi nchị ehi Fulani. Ndi Fulani a akpakọrọla obosara ala ebe ndi obodo a na-akọ ugbo ma; foro ntụtụ ha taa na ndi obodo ahụ ga akwụtaraRead More →
ARỤ NA-EME, LEKWANỤ ONYE CHỌRỌ ILI NNE YA NA NDỤ!!!
Post Views: 179 Ndi uwe ojii mba Kenya anwụchiela otu nwoke dị afọ iri anọ, mgbe ọ na esi ọnwụ ile nne ya na ndụ. Nwoke a nke aha ya bụ Chris Wamalwa bụ onye mpaghara Kabuchai. Ọ bụ mgbe ndi na-agafe n’ụzọ malitere nụba mkpu nne nwoke a na-etiRead More →
Post Views: 164 “Ọdị ezigbo mkpa na ndi Awụsa na ndi Yoruba matara na enwere ụmụ afọ Igbo ndi bụkwa ezigbo ndi okpukpere chi Alakụba, na-agbanyeghị na ha pere mpe n’ọnụ ọgụgụ. O kwesịrị ka enye ha ezigbo nkwado” Nke a bụ ọnụ mmiri okwu onye isi oche ndi otuRead More →
Post Views: 219 <img src="http://www.hoohaa.com.ng/wp-content/uploads/2018/07/IMG_20180727_150946-300×216.jpg" alt="" width="300" height="216" class="alignnone size-medium wp-image-2045" / Ndi oji egbe eje agbagbuela Sunny Ejiagwụ. Sunny bụbu onye isi oche ndi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress, (APC) nke okpuru ọchịchị ime obodo mgbago ugwu Ideatọ nke steeti Imo. Sunny bụ onye eji ọhaneze maraRead More →